Tobban Iyo Saddex Wasiir Oo Iska Casilay Maamul Hoosaadka Hir Shabeele Hadda – Heemaal News Network
Toban iyo saddex wasiiro oo isugu jira wasiir iyo wasiiro kuxigeeno ay goor dhow iska casilay xukuumada hoosaadka uu hogaamyo madaxweyne Cosoble, iyadoo uu sii xoogeystay ololaha ka dhan ah madaxweynaha Hirshabeelle Cali C/llaahi Cosoble.
Shir jaraa’id oo wasiirada goor dhow ku qabteen magaalada Jowhar ayay sheegeen inay isku casileen waxqabad la’aan Madaxweynaha Hirshabeelle iyo inuu ka gaabiyay howlihii loo igmaday.
Qaar ka mid ah Wasiirada is casilay ayaa ka mid ah xubnaha Baarlamaanka Hirshabeelle, iayaga oo ku biiray ololaha ka dhanka ah Madaxweynaha Hirshabeelle oo saaka laga diyaariyay mooshin xil ka qaadis ah.
Guuxa maalmahan ka soo baxayay Xildhibaanada Hirshabeelle ee ku sugnaa magaalada Jowhar ayaa ahaa mid ay ku dalbanayeen inuu dhaco is bedel, isla markaana maamulka Hirshabeelle ay xilligan uu u baahan yahay badbaado, waxaana Madaxweynaha ay ku eedeeyeen waxqabad la’aan uu waqtigiisa ugu badana ku qaatay magaalada Muqdisho.
Zambia Oo Laashay Dambi Qiyaano Qaran Ahaa Oo Loo Haysatay Hogaamiyaha Mucaaridka Ugu Wayn Dalkaas
6000 Oo Tan Raashin Gurmad A Oo La Kala Diray Maamul Goboleedyadda Dalka
Guddiga abaaraha Somaliya ayaa raashin u kala diray maamul goboleedyada ka jira dalka. Raashinka ayaa loo kala diray maamul goboleedyadda kala ah Puntland, Galmudug, Hirshabeella iyo Jubaland, waxaana la filayaa in saacadaha soo socda uu […]
Dadwaynaha Degmada BuuloBurde Oo Iska Furay Wadooyin U Xidhnaa Ciidmada AMISOM.(Sawiro)
Wararka ka imanaya degmada Buuloburde ee gobolka Hiiraan ayaa sheegaya in ciidmada AMISOM ay fureen wadada laamiga ah oo hore ugu xirneyd kadib markii ay wadahadalo dhex mareen maamulka degmada iyo saraakiil ka tirsan ciidamada […]